Akanjo mahazatra Ekoatoriana, ahoana no anaovany? | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | America, kolontsaina, Toerana fitsangatsanganana, Ekoatera
Ekoatera dia firenena iray any amin'ny faritra Andes, misy trano sy kolontsaina manankarena, izay hiafara hita taratra amin'ny akanjo mahazatra izay mbola manan-kery ihany koa any amin'ny tanàna maro. Fantatrao ve ny fitafiana mahazatra an'i Ekoatera?
Raha jerena ny karazan'akanjo mahazatra Ekoatera dia angamba ny tranga ny akanjo fanaon'ny faritra Otavalos Hita ny fampiasana lamba firakotra manga malalaka manarona ny vatana ary mifatotra amin'ny kofehy vita amboradara amin'ny andilana, ankoatry ny kojakoja toy ny rojo volamena sy fehin-tànana no ampiasaina. Ny volo koa mifatotra tsara foana, mamorona rambony.
Ao amin'ny faritra Andesan'ny Saraguro dia ho hitantsika ny fampiasana ponchos, izay mazàna manana feo maizina miaraka amin'ny mainty hoditra, tandindon'ny hery, izay mifanohitra amin'ny fampiasana satroka fotsy sy fehy hoditra lehibe.
Ao amin'ny faritry ny ala any Ekoatera dia ahitanao fitoviana lehibe amin'ny any an-dafin'ny sisintany miaraka amin'i Peroa, izay ahitanao ny fisian'ireo rojo mareva-doko noho ny fampiasana volom-boronaHo fanampin'izany, mazàna ianao dia mahita lambam-paty na akanjo izay misy antsipiriany bebe kokoa dia ireo sary namboarina teo amboniny.
Saingy, te hahalala bebe kokoa momba ny akanjo mahazatra an'i Ekoatora ianao? Aza very tsipiriany!
1 Akanjo mahazatra Ekoatoriana mahazatra nentim-paharazana
1.1 Fomba samihafa amin'ny kolontsaina samihafa
1.2 Vehivavy avy amin'ny tanànan'ny sierra
1.3 Foko amin'ny ala tropikaly any Amazone Ecuador
1.4 Ny tanànan'ny morontsiraka
1.5 Ny vahoaka Montubio
2 Ahoana ny fomba fitafiana raha mankany Ekoatera ianao
3 Ahoana ny fomba fitafiana ofisialy any Ekoatera
3.1 Raha lehilahy ianao
3.2 Raha vehivavy ianao
4 Ahoana ny fomba fitafiana tsy mendrika any Ekoatera
Akanjo mahazatra Ekoatoriana mahazatra nentim-paharazana
Fomba samihafa amin'ny kolontsaina samihafa
Ny akanjo nentim-paharazana Ekoadaoro mahazatra indrindra dia mbola malaza eo amin'ny fiaraha-monina Ekoatoriana, raha ny tena izy dia misy foko sasany izay mbola mividy sy mivarotra akanjo nentin-drazana hitafy azy ireo tsy tapaka. Etsy ankilany, misy ny kolontsaina toa ny "the colorados" an'i Santo Domingo izay saika very tanteraka ny fitafiana nentin-drazana., ary ny akanjo isam-paritra dia tsy hita afa-tsy amin'ny maha-manintona mpizahatany azy. Ekoatera dia misy foko maro samy hafa manana kolontsaina sy fomban-drazana samy hafa, noho izany tsy misy fitafiana nasionaly sy manokana any Ekoatera.
Ohatra, ny akanjo nentim-paharazana an'ny faritra Otavalos angamba no malaza indrindra sy matetika indrindra ao Ekoatera. Amin'ny vondrom-piarahamonina maro any an-tendrombohitra dia mitazona fomban-drazana maro miaraka amin'ny fitafiany mahazatra izy ireo, toy ny satroka miavaka, ponchos na blouse misy peta-kofehy izay matetika ampiasain'ny olona Ekoatoriana maro.
Vehivavy avy amin'ny tanànan'ny sierra
Ny vehivavy avy amin'ny tanàna samy hafa ao amin'ny sierra dia manao zipo miolikolika miloko marevaka misy amboradara eo an-tokontany. Fa ny vondrom-piarahamonina, izay samy hafa be, dia afaka manana ny karazany avy amin'ny akanjo na satroka. Matetika ny vehivavy dia manao lamba volonondry ho entina mividy na zazakely ao an-damosin'ilay vehivavy.
Foko amin'ny ala tropikaly any Amazone Ecuador
Ireo foko isan-karazany avy amin'ny ala tropikaly any amin'ny Amazon Ecuadorian dia mbola mitafy akanjo lava volo nentim-paharazana ary kojakoja hafa misy dikany ara-poko na foko. Na dia maro aza ireo mpikambana ao amin'ireo foko ireo no afaka manambatra na manolo ireo kojakoja fitafiana ireo amin'ny hafa manana fomba tandrefana kokoa.
Ny tanànan'ny morontsiraka
Ny tanànan'ny morontsiraka dia eo anelanelan'ny tendrombohitra sy ny ranomasina, very fomba amam-panao sy kolontsaina maro izy. Ny fitafiany nentim-paharazana amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy dia samy hafa be amin'ny fitafian'ny olona any sierra. Na dia misy aza ny fiarahamonina eny amin'ny morontsiraka izay tsy manana akanjo nentin-drazana.
Ny vahoaka Montubio
Ao amin'ny tanànan'i Montubio (manarona ny faritanin'i Manabí, Los Ríos, Guayas ary Santa Elena) dia miavaka izy ireo noho ny satrony (fomba koboy) ary mazàna izy ireo no mitondra antsyManao kiraro fingotra izy ireo saingy tsy manana akanjo nentim-paharazana mifandray amin'izy ireo.
Saingy satria misy vondrom-piarahamonina maro dia maro, dia tsy misy ny akanjo nentim-paharazana izay mandrakotra an'i Ekoatera rehetra.
Ahoana ny fomba fitafiana raha mankany Ekoatera ianao
Ny akanjo mampiavaka ny Ekoatoriana dia matetika famantarana ny faritra niaviany. Ohatra, ny lehilahy manao ponchos manga, pataloha misy halavan'omby ary satroka dia azo inoana fa avy amin'ny faritra Quito.. Ohatra iray hafa ny vehivavin'ny Andes izay matetika manao blouse fotsy, shawl miloko sy capes volamena ary fehin-tanana haran-dranomasina mena. Ireo mpitsidika mandeha any Ekoatera amin'ny maha mpizahatany azy dia tsy antenaina hitafy ireo akanjo nentim-paharazana ireo, fa azonao atao izany. Raha manapa-kevitra ny hitafy ny fomba fanaovan'izy ireo azy ianao, dia horaisina ho olona manan-danja amin'ny fanomezana lanja an'ity karazana akanjo ity.
Ahoana ny fomba fitafiana ofisialy any Ekoatera
Raha miakanjo ara-dalàna any Ekoatera ary afaka mandeha araka ny akanjon'ny firenena ianao dia afaka manaraka ireto torohevitra manaraka ireto:
Raha lehilahy ianao
Manaova akanjo mainty sy karavato ho an'ny fivorian'ny orinasa.
Manaova pataloha sy karavato raha handeha hiasa amin'ny orinasa Ekoatoriana ianao.
Manaova akanjo lava ary misoroka satroka any amin'ny trano fisakafoanana na tranon'ny fianakaviana.
Raha vehivavy ianao
Manaova blouse, ba kiraro ary kiraro avo miaraka amina zipo na pataloha ary tsy maintsy manatrika fivorian'ny orinasa na asa ianao.
Ny fitafiana dia tokony ho mpandala ny nentin-drazana ka tsy azo tery na ambany. Zipo dia mety tsy ho fohy na manome antony.
Afaka manao akanjo maivana, zipo na pataloha ianao hisakafoanana any ivelany na hitsidihana olona any an-trano. Ny akanjo Cocktail dia miasa amin'ny hetsika ara-dalàna ihany koa, na dia tsy ekena aza ny akanjo ambany.
Ahoana ny fomba fitafiana tsy mendrika any Ekoatera
Raha miakanjo akanjo tsy izy, dia samy tokony hanao akanjo lava ny lehilahy sy ny vehivavy, ny fanatanjahan-tena, ny kiraro fitsangantsanganana ... tsara izany mandritra ny herinandro. Afaka manao akanjo ba pataloha na pataloha koa izy ireo amin'ny faran'ny herinandro.
Hevitra iray hafa ny fanaovana pataloha jeans, lobaka na blouse ahazoana aina mba hitsidihana ireo toeram-bahoaka. Ny akanjo fitondra mandehandeha, ny akanjo fohy ary ny flip-flop dia tokony hitafy amoron-dranomasina sy dobo.
Ireto misy ohatra vitsivitsy monja amin'ny fitafiana mahazatra an'i Ekoatera ary ny akanjo maoderina maoderina indrindra izay tsara ho fantatrao raha te-ho any Ekoatera ianao ary miakanjo arakaraka ny toerana. Na dia manoro hevitra anao aza aho mba hahalalana arakaraka ny faritra tianao halehanao hahafantaranao hoe karazana akanjo mahazatra inona no anaovany matetika ary amin'ity fomba ity dia aza mifandona raha te hitady akanjo arak'izay amin'ny fomban-drazany.
Fomba amam-panao any Ekoatera
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Akanjo mahazatra an'i Ekoatera
Isabel Sisimit Esquit dia hoy izy:
Araka ny filazan'i Patricia Lurssen, ny sarin'ireo tanora manao pataloha mena miloko mena dia ilay ampiasain'ny lehilahy ao amin'ny departemantan'i Huehuetenango any Goatemalà. Mitandrema amin'ny sary fa miteraka fikorontanana.
Valiny tamin'i Isabel Sisimit Esquit